नेपाल पार्टी फुटाउने गतिविधि गरिरहनुभएको छ : अधिकारी
श्रावण २८ गते, २०७८ बिहिवार
12th August, 2021 Thu १०:४२:५९ मा प्रकाशित
पार्टीलाई एकतवद्ध बनाउन विवाद समाधान कार्यदलले तयार गरेको १० बुँदे सहमतिलाई सबैले इमान्दारीताका साथ पालना गर्नुपर्छ । १० बुँदे सहमति धेरै विचार, विमर्शपछि दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरूको सहमति लिएर तयार गरेको हो । यसलाई हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरी सकेका छौँ । विवाद समाधानका लागि यो नै उत्तमविन्दु हो । पार्टी विभाजित भएर समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्नु हुँदैन । एमाले जिवन्त प्रतिभाहरूको पार्टी हो । यस्ता विवाद अहिले मात्र होइन पहिल्यै पनि भएका थिए । विभिन्न कालखण्डमा टुटफुट भएर यहाँसम्म आएको हो । पछि पनि हुन्छ । अहिलेको समाधानको उत्तमविन्दु भनेको १० बुँदे हो । यसमा जो अडिदैन त्यो पार्टी र सिद्धान्तका लागि धोकेवाज हो । त्यसलाई आम कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकहरूले राम्रो मान्दैनन् । सबैतिर अतिवाद र दृष्टिकोणलाई फालेर पार्टीको आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाएर जानु पर्छ ।
माधवजीहरूले पार्टी बाहिर बसेर गुनासो, विरोध र चिन्ता गर्ने होइन । उनीहरू निसर्तरुपमा पार्टीको बैठकमा आउनुपर्छ । उहाँहरू जुनजुन जिम्मेवारी रहेका छन्, त्यही जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ । त्यसका लागि बैठकमा आउने र कमिटीलाई कन्भिन्स गर्ने बाहेक उहाँहरूको अर्को विकल्प छैन । निसर्त पार्टीको बैठकमा सहभागी भए उहाँहरूले उठाएका राम्रो कुरालाई हाम्रो साथ र समर्थन रहन्छ । बैठकमा नआउने, बाहिर छु्ट्टै भेला गर्ने, समानन्तर गतिविधि गर्ने, पार्टीलाई कमजोर बनाएर नचल्ने अवस्था बनाउन मिल्छ ? अध्यक्षले पटक पटक बैठकमा आउन आग्रह गरिरहनुभएको छ । उहाँले १० बुँदेको कुरा उठाए, त्यो भयो । जेठ २ मा फर्कौँभन्दा त्यसमा पनि फर्कियौँ । उहाँहरूले माग गरेका विषय पार्टीले सम्बोधन गरिसकेपछि फेरि विभिन्न अत्तो थापेर बस्नुको कुनै तुक छैन ।
मुलुकमा यत्रो कोभिड महामारीको चुनौति छ । सरकारले साना साना कुरामा पनि पेलेर जान खोजेको छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत हामीलाई फसाउन खोजिरहेको छ । यस्तो बेलामा पार्टी दिशाहिन र प्रतिकृया रहित भएर बस्यो भने राम्रो हुँदैन । दुई शीर्ष नेताबीच वार्ता संवाद हामीले रोकेको हो ? किन वार्ता नभएको ? उनीहरूको अराजक गतिविधिबीच पनि पार्टी एक शिष्ट र सालिन तरिकाबाट अगाडि बढिरहेको छ ।
माधव नेपालले कहिल्यै पनि पार्टी एकताको पक्षमा उभिनु भएको छैन । उहाँ पार्टी एक बनाउन होइन, पार्टी फुटाउने गतिविधि गरिरहनुभएको छ । किन समानान्तर गतिविधि गर्नुहुन्छ ? बैठकमा आउनुहोस, सिंगै कमिटीलाई कन्भिस गर्नुहोस । हामी पार्टी एकतालाई कायम राख्न अझै पनि प्रयास गर्छौँ । मलाई आशा छ, माधव समूह निसर्त पार्टीको बैठकमा आउनुहुन्छ ।
(अधिकारी ओली पक्षीय नेता हुन्)
मंसिर ३ गते, २०७८ - १०:५५
यस्तो छ मौसमी पुर्वानुमान
काठमाडौं। आज शुक्रबार देशभरको मौसमी बदली भएको छ। मुलुकका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ भने केही भूभागमा वर्षाको पनि सम्भावना र...
मंसिर २ गते, २०७८ - १५:२७
पुन शक्तिशाली बन्दै माओवादी : सात लाख नाघे पार्टी सदस्य
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी सदस्यको संख्या ७ लाखभन्दा बढी पुगेको छ। हालै सम्पन्न पार्टी सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका क्रममा सात लाखभन्दा बढ...
मंसिर १ गते, २०७८ - १२:२०
यी हुन् कालो सुचिमा परेका चार निर्माण कम्पनि
काठमाडौं। सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न चार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। खरिद कार्यालयको मंगलबार बसेको बैठकले बुधबारद...
मंसिर १ गते, २०७८ - १०:५८
यी हुन् विश्वकप फुटबलमा छनोट भएका यूरोपका १० टोली
एजेन्सी। विश्वकप फुटबल खेल्ने यूरोपका १३ मध्ये १० टोलीको टुंगो लागेको छ। बाँकी ३ टोली प्ले अफबाट छनोट हुनेछन्। यसपटक यूरोपका फुटबल महाशक्तिहरु नै व...
काभ्रेपलाञ्चोक डाँडापारिको विकासको लागि प्रतिबद्ध छु : प्रचण्ड